Fiainam-piangonana: handinika ny handraisana ny papa François ny eveka | NewsMada
Fiainam-piangonana: handinika ny handraisana ny papa François ny eveka
Efa maka bahana. Nivory efa herinandro ary mbola hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem). Tanterahina eny Ambatoroka izany fihaonana izany ary efa fanao isan-taona ny volana mey tahaka izao. Na izany aza, hiavaka ny amin’ity indray mandeha ity noho ny fitsidihan’ny papa François eto amintsika, ny volana septambra ho avy izao. Anisan’ny tafiditra amin’izao fivoriana izao ny momba izany. Efa nisy rahateo ny fidinana ifotony nataon’ireo eveka sasantsasany teny Androhibe, kianja Soamandrakizay, handraisana ny lamesa hotarihin’ny ray masina, ny 8 septambra izao. Nijerena ny fizotry ny asa niaraka amin’ny fitondram-panjakana.
Efa miroso ny asa rehetra…
Efa nahazo ny fankatoavana avy any amin’ny fiketrahana masina rahateo ny drafitra rehetra amin’izany toerana izany ka hiditra amin’ny dingana manaraka ny asa. Tombanana fa ho vita ara-potoana ity fotodrafitrasa lehibe, handraisana mpino kristianina anetsiny, ity.
Ankoatra izany, fotoana koa ny fivorian’ny Fem tahaka izao handinihana ny raharaha anatin’ny fiangonana. Eo koa anefa ny momba ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Inoana fa hanana ny ambarany izy ireo. Tsiahivina fa anisan’ny nivoitra tamin’ny hafatra nataon’ny Fem, ny volana novambra teo, taorian’ny JMJ tany Mahajanga, ny tahotry ny tanora sy ny fahadisoam-panantenana. “Raisinay eveka ny tebiteby sy ahiahin’ireo tanora zanatsika ireo ka mitodika amintsika raiamandreny sy olon-dehibe natao ho modelim-piainana sy hananatra izahay: toy ny ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imason’ny zanany ny hita. Mifanao valala an-karona: tsy mifankahazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin’ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe: « ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro ».
Volabe tsy fanta-pihaviana amin’ny propagandy
Nohitsin’ny hafatra fa potika ny soatoavina maha Malagasy, maty ny marina, very ny zo aman-kasina maha olona ny maro. Simbain’ny mpanao politika ny toe-tsain’ireo olon-tsotra, araka ny hafatra hatrany. “Mahalasa saina ny nahita volabe tsy fanta-pihaviana nampanontany ny ory tamin’ireny fotoan’ny fampielezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re?”, hoy izy ireo tamin’izany. Teo koa ny fanaingan’ny eveka ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary hanaja ny tena safidin’ny vahoaka, nanoloana iny fifidianana filoham-pirenena iny. “Mila dinihina tsara ny lalàmpanorenantsika mba hiorina sy ho matotra ka hanampy ny tsirairay hanana ny tena fitiavan-tanindrazana, mitaky fahafoizana aina manontolo… Aza ekena mihitsy ny fanapotehana sy ny fanoloana ny kolontsaina iorenan’ny soatoavina. Alaviro ny fivarotana ny harem-pirenentsika fa masina ny tanindrazana”, hoy ihany ny Fem.
Araka izany, andrasana indray ny hafatry ny fivoriamben’ny eveka amin’ity indray mandeha ity .